नाकामा रोकियो पुस्तक, सरकारले गर्न खोजेको के ? - समाचार | Kavyalaya - काव्यालय
पथलैयाको राजश्व नाकामा पुस्तक रोकिए
नाकामा रोकियो पुस्तक, सरकारले गर्न खोजेको के ?
by रीना मोक्तान January 30, 2020
काठमाडौँ — ‘अब हामी पुस्तक आयात गर्न नसक्ने भएका छौं । त्यसैले जो-जो आफ्नो मनपर्ने पुस्तकको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हामी एकदमै माफी माग्न चाहन्छौं । हामीले सक्ने प्रयास गर्‍यौं तर यो हाम्रो हातमा छैन ।’
पोखराको मण्डला पुस्तकले हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो बिलौना गर्‍यो। भारतबाट विदेशी पुस्तक आयत गर्दै आएका नेपाली पुस्तक विक्रेताको साझा समस्या पोखराको मण्डलाले फेसबुकमा पोखेको हो।
विदेशी पुस्तक भारतबाट आयत गर्दा मूल्य सस्तो पर्न जान्छ। त्यसैले विदेशका महँगा पुस्तक पनि यहाँका विक्रेताले सजिलै नेपाल भित्र्याउँथे। अनि सुपथ मूल्यमा नेपाली पाठक सामु पुग्थे। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेस गर्ने बेला अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले विदेशबाट छपाई तथा विक्रीका लागि नेपाल भित्रने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरे।
त्यसपछि पुस्तक विक्रेतामा समस्या आयो। अहिले त डलरमै कर तिर्नुपर्ने भन्दै भन्सारमा पुस्तक नै रोकिदिएको पुस्तक विक्रेताको गुनासो छ।
मण्डलाको गुनासो पनि यतिमै सिमित छैन। मण्डला थप लेख्छ, ‘नेपालका पुस्तक विक्रेताले पुस्तकमा भन्सार शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेको छ। हामी भारतीय रुपैयाँमा कर तिर्न तयार छौं। तर सरकार डलरमै कर तिरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले पुस्तक उपलब्ध गर्न असमर्थ भयौं।’
मंगलबार राजधानीमा रहेका केही पुस्तक पसल चहार्दा सबै वितरकले एउटै गुनासो गरे, ‘नयाँ पुस्तक भन्सारमै रोकिदियो, डलरकै मूल्यमा कर तिर्नुपर्ने रे’। उनीहरुले भारतीय रुपैयाँमा कर तिरेर पुस्तक मगाएका थिए।
पुस्तक भन्सारमा नभइ राजश्व अनुसन्धान कार्यलय पथलैयामा रोकिएको छ। अझै पुस्तकमाथि अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँका अनुसन्धान अधिकृतले फोन सम्पर्कमा जानकारी दिए। दुई दिनभित्रमा नै नतिजा आउने उक्त अधिकृतले बताए। ‘हो एक ट्रक पुस्तक रोकिएको छ। अब अनुसन्धान हुँदैछ, उहाँहरुले गल्ती गरेको हो भने सजाय पाउनुहुन्छ। नभए पुस्तक काठमाडौं पठाउँछौं,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने।
खासमा अहिले भन्सारमा दाखिला गरेको रकम र किताबमा लेखिएको मूल्य फरक परेपछि भन्सार कार्यालयले कर छलीको आशंका गर्दै किताब आयत रोकिएको हो। फाइन प्रिन्टका निर्देशक अजित बराल भन्छन्, ‘खासमा अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएका प्रकाशकहरुले निम्न क्रय शक्ति भएको क्षेत्रमा मूल्य नै कम राख्छन्। यो सब्सीडी हो। तर यसलाई नै मूल्य कम गरेर कर छली गरेको भन्ने गलत आरोप लगाइएको छ।’
थापाथलिस्थित एकता बुक डिस्ट्रिब्यूटर्सकी एक कर्मचारी माथिल्लो तल्लामा पुस्तक सम्याउँदै थिइन्। उनले पुस्तक मिलाई सकेपछि पुस्तक राख्ने दुई र्‍याक खाली भए। खाली र्‍याक देखाउँदै उनले भनिन्, ‘नयाँ पुस्तक नआएर र्‍याक खाली भइसक्यो। तर भन्सारमा रोकेको नयाँ पुस्तक कहिले पो आउला?’
उनका अनुसार दैनिक विदेशी पुस्तकको खोजीमा आउने पाठक, विद्यार्थीहरु र खुद्रा व्यापारी रित्तो हात घर फर्किरहेका छन्। अहिले भन्सारमा पुस्तक रोकिएपछि पाठक निराश बनेका उनले अनुभव सुनाइन्।
‘पहिला त २०/२५ दिनमा अर्डर अनुसारको पुस्तक आइसक्थ्यो। त्यतिबेला पाठकले खोजेको पुस्तक १ महिनाभित्रमा पूरा गरिदिन्थ्यौं। उहाँहरु खुशी हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। किताबको नाम टिपाएर पाठक घर फर्कन्छन्,’ उनले सुनाइन् ‘बीचमा सहज भएको थियो तर अहिले फेरि विदेशी पुस्तकको आयत ठप्पै भएको छ। गाह्रो छ। ६ महिनादेखि यस्तै छ हालत छ। पाठकले खोजेको किताब पाउनुहुन्न, अब पुरानो किताब कति पढ्ने?’
विदेशी आख्यान र गैरआख्यान खोज्ने पाठक पनि पसलमा घट्दै गएको उनले बताइन्। अन्य देशमा पुस्तकमाथि कर नलगाइने बताउँदै नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास हुनुपर्ने धारणा छ उनको।
१० प्रतिशतले कर तिर्दा विक्रेतालाई खासै फाइदा हुँदैन। त्यसैले भन्सार शुल्कले विक्रेतालाई घाटा हुने उनी बताउँछिन्। ‘एकैचोटी १० प्रतिशत कर लगाइदिँदा त्यसले दुईगुणा फरक पार्दो रहेछ। शिक्षा क्षेत्रमा त सरकारले सुविधा दिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन् ‘एक प्रकारले हाम्रो व्यापार त छँदैछ। तर हामी त मध्यस्थताको काम गरेर संसारभरको पुस्तक झिकाउने प्रयत्न गर्छौं। पाठकलाई सुलभ मूल्यमा दिने उद्देश्य नै हो।’
अहिले एकतामा नेपाली पब्लिकेसन्सबाट छापिएका पुस्तकमा छुट दिइन्छ। विदेशी पुस्तकमा भने छुट दिनै हम्मेहम्मे पर्ने उनको अनुभव छ।
जमलमा रहेको एजुकेशन बुक हाउसकी बिना श्रेष्ठ नयाँ पुस्तक भन्सारमा रोकिए पछि हैरान छिन्।
पुस्तक पसलमा पाठकहरुको आवाजजावत बाक्लै थियो। काउन्टरमा टोलाइबसेकी बिनाले आफ्नो दुखेसो पोखिन्, ‘वीरगञ्ज भन्सारबाट पुस्तक आउँदै थियो। त्यहाँबाट आउँदै गर्दा बीच बाटोमा (राजश्व अनुसन्धानमा) डलरमा कर लिनुपर्छ भनेर किचकिच गरेर पुस्तक रोकिएको छ। सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ के हो खै कुन्नी? विदेशी पुस्तकको मूल्य डलरमा छ। डलरमै कर तिर्नुपर्छ भनेपछि रोकिएको हो। यस्तो अवस्थामा पाठकले नयाँ पुस्तक पढ्न पाएका छैनन्।’
पाठक पनि सितिमिति महँगो मूल्यमा पुस्तक किनि हाल्दैनन्। करकै कारण विक्रेताहरु समस्यामा परेको सुनाउँछिन बिना। विक्रेता मात्र होइन अहिले पाठक पनि नयाँ पुस्तक पढ्न नपाएर तनावमा छन्।
अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका प्रधान सम्पादक तथा पाठक विश्वास बरालले भने ‘अलिअलि फरक त पर्छ, आफूलाई मनपर्ने पुस्तक विदेश गएरै किन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ ढिलो आइपुग्छ पुस्तक पनि। कमाउनेलाई त पुस्तकमा खर्च गर्न ठूलो कुरा भएन। तर यसले विद्यार्थीहरुलाई त समस्यामा पारेको देखिन्छ।’
केही समय अगाडिस्तम्भकार उज्ज्वल प्रसाईंले मण्डला बुक्स प्वोइन्टमा अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले छापेको केही पुस्तकहरु मगाए। लामो समयदेखि उनी कुरिरहेका छन्। तर पुस्तक आइपुगेको छैन। करकै कारण विक्रेतामा पुस्तक आयत गर्ने उत्साह घटेको उनी बताउँछन्। ‘अप्ठ्यारो छ नि भनेको पुस्तक ल्याउँदैनन्। त्यसमाथि समयमा आइदिँदैन पुस्तक। नयाँ पुस्तक पढ्नु पर्‍यो भने यसै पनि दाम महँगो छ। त्यसमाथि कर लगाइदिएको भएर पाइरहेको छुट पनि पाइएको छैन। पैसा पहिला भन्दा बढी महँगो तिर्नु परेको छ,’ उनले पुस्तक पढ्न नपाउनुको गुनासो पोखे।
पुस्तक महँगो भएकै कारण दुईवटा पुस्तक लैजानेले पनि एउटै मात्र किन्न थालेको एजुकेशन बुक हाउसकी बिना बताउँछिन्। पुस्तकबाट पाउने केही प्रतिशत नाफा पनि करमै जाने भएपछि पुस्तक पसलको भाडासमेत तिर्न गाह्रो भएको बिनाले बताइन्। ‘पहिला कर तिर्नु नपर्दा हामी ५ प्रतिशत नाफाले पुस्तक पसलको बहाल तिर्ने, स्टाफ खर्च समेट्थ्यो। त्यसमै मिलाएर हामी पाठकलाई पनि छुट दिएर पुस्तक बिक्रि गर्थ्यौं’ उनले सुनाइन्।
सरकारले पुस्तकमा कर लगाएको केही महिना त उनले विदेशी पुस्तकमा केही छुट दिएर नै बिक्रि गरिन्। तर, अहिले कर लगाएको पुस्तकको दाम सुनेरै पाठक तर्सिन थालेका छन्। ‘विदेशी पुस्तक ८/९ सय घटी छैन। अब त्यसमा छुट नै नपाएपछि कसले किन्छ र?’ उनले प्रश्न गरिन्।
गफिँदै गर्दा दुई युवती पुस्तक लिएर उनको काउन्टर छेउ आइपुगिन्। बिना २ वटा पुस्तकको हिसाबमा लागिन्।
‘छुट पाइँदैन?’ एक युवतीले सोधिन्।
जवाफमा बिनाले भनिन्, ‘नेपालकै पब्लिकेसनलाई १० प्रतिशत छुट हुन्छ।’
युवतीले हत्त न पत्त भनिहालिन् ‘जम्मा?’
‘ल हेर्नुस् १० प्रतिशत छुट दिँदा पनि मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरु। अब हामी अंग्रेजीमा छँदैछैन छुट भन्यो भने कसरी पाठकले चित्त बुझाउँछन्। यस्तो भइरहेको छ के समस्या !‘ युवतीलाई पुस्तक बेच्दै उनले आफ्नो पीडा दोहोर्‍याइन्।
बागबजारमा रहेको रत्न बुक डिस्ट्रिब्यूटर्समा पाठकहरु आफ्नै धुनमा पुस्तक खोज्दै थिए। म्यानेजर सुरेश श्रेष्ठ काउन्टरमा बसेर पाठकसँग पुस्तकको मोलतोल गर्न व्यस्त देखिए। रत्नमा पहिला विदेशी पुस्तक उपलब्ध हुँदा पाठक संख्या बढेको थियो। तर अहिले नयाँ पुस्तक नभएर पाठक घटेको सुरेशले सुनाए।
पहिला कर नलगाउँदा त रत्नले विदेशी पुस्तक धेरै नै मगाउँथे। अहिले करले गर्दा पुस्तकको खर्च बढी भएका कारण मगाउने पुस्तकको संख्यामा कम भएको उनी बताउँछन्। ‘भन्सार कर नलगाउँदा हामी स्वतन्त्र भएर पुस्तक मगाउँथ्यौं। अहिले त भन्सार लागेपछि पहिला १० वटा मगाइन्थ्यो भने अहिले ५ वटा मात्तै मगाउँछौं। अब एड्भान्स कर लाग्ने भयो। पुस्तक चल्ने नचल्ने थाहा हुँदैन,’ उनले सुनाए।
नेपालमै छापिएका कोर्स बुकका लागि सन्दर्भ पुस्तक विदेशी पुस्तक नै हुने गर्छ। त्यसैले पुस्तक नआउँदा यसले विद्यार्थीलाई पनि समस्यामा पारेको उनी तर्क गर्छन्। सरकारले पुस्तकमा नभइ ज्ञानमा भन्सार लगाएको उनको भनाइ छ। ‘ज्ञान भनेको त बाँडिनु पर्ने हो। अहिले यही ज्ञानमा भन्सार शुल्क लगायो। खासमा पुस्तको मूल्य पनि समस्या होइन। यहाँ त पुस्तक नै आएन,’ उनले सुनाए।